China Soft PVC Izindondo ifektri abakhiqizi | SJJ
Izindondo zihlala zisetshenziswa kwezemidlalo, ezikoleni, emaphathini nasemicimbini yemiklomelo, izikhumbuzo, ukukhushulwa kanye nezipho. Ngokubheka izinzuzo ezinempilo, ezemvelo nezinye izinzuzo, izinhlangano eziningi ngokwengeziwe zikhetha izindondo ezithambile ze-PVC esikhundleni sezindondo zensimbi ezijwayelekile.
Izindondo zihlala zisetshenziswa kwezemidlalo, ezikoleni, emaphathini nasemicimbini yemiklomelo, izikhumbuzo, ukukhushulwa kanye nezipho. Ngokubheka izinzuzo ezinempilo, ezemvelo nezinye izinzuzo, izinhlangano eziningi ngokwengeziwe zikhetha izindondo ezithambile ze-PVC esikhundleni sezindondo zensimbi ezijwayelekile. Izindondo ezithambile ze-PVC zenziwa ngezinto ezifile ze-PVC ezithambile futhi ezilula, zilungele ezemvelo, kuhle ukuchaza amalogo anemininingwane ngamazinga ombala aqhakazile futhi abalulekile.
Izindondo zethu ezithambile ze-PVC zihlala zenziwa ngokuya ngemiklamo yekhasimende. Amalogo angenziwa nge-2D noma nge-3D ezinhlangothini ezilodwa noma zombili, ngombala ogcwalisiwe, ophrintiwe, oqoshiwe wenqubo yezobuchwepheshe nokunye. Uchwepheshe wethu ochwepheshe uzonikeza ukusikisela okwengeziwe ekufinyeleleni imibono yakho nemiphefumulo ejulile kuzindondo ezithambile ze-PVC. Ngokunamathiselwe okuhlukahlukene, izindondo ezithambile ze-PVC zingaxhunyaniswa kumaribhoni noma kumabha weribhoni. Amalogo awafakwa nje kuphela ezindondweni, kodwa futhi nasemaribhini noma imigoqo yamaribhoni, ukukhombisa izinto eziningi nokukhangisa izinhlobo zakho nezihloko kangcono.
Ama-Motifs: I-Die Struck, i-2D noma i-3D, izinhlangothi ezilodwa noma ezimbili, imiklamo ingenziwa ngezifiso.
Izimo: Ukuzungeza, isikwele, noma obuphi ubujamo ngokuya ngemiklamo yakho
Usayizi: ngaphansi kuka-150 mm noma uncike kumiklamo yakho
Ukuqedela: Ama-logo angagcwaliswa ngombala, aphrintiwe, abhalwe nge-embossed noma alahlwe amakhosombe, i-Laser
Langaphambilini Izithwathwa Zepensela Elithambile le-PVC
indondo ye-pvc ethambile
Izindondo ezine-Short Ribbon Drape
Ezemidlalo Izindondo & Medallions